nalainy tamina olona maro samihafa lazainy fa entina hanaovana sorona. Tao an-tranony teo Andavamamba no tra-tehaky ny polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika faha-4 io mpisandoka io, ny sabotsy lasa teo, tamin’ny 12 ora atoandro. Fitoriana miisa telo sy fijoroana vavolombelona maro no voarain’ny polisim-pirenena mahakasika azy io izay milaza ho manana sy mivarotra merikiora ka maka volabe amin’olona. Efa hatramin’ny taona 2017 izy no naka vola tsikelikely tamin’ireo mpividy noreseny lahatra. Araka ny fifanarahany tamin’ireo mpividy anefa, ny volana febroary teo no tokony ho nanomezany ny entana nampanantenainy, saingy nanomboka teo dia narirarirany izy ireo ary tsy azo amin’ny finday koa izy. Tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny «Brigade criminelle» teo Anosy ireo mpividy miisa telo ka nandray ny andraikiny ny polisim-pirenena. Nandritra ny fisavana ny tranony dia nahatrarana ireo singa lazainy fa fanaovana sorona.